Usuku My Pet » Indlela Have An Amazing Date First
Igcine ukubuyekezwa: Oct. 21 2020 | 5 imiz ufunde
Usuku lokuqala kungaba isikhathi esishubile bobabili. Akekho owaziyo ukuthi yini ongakulindela, ngisho uma ngikhulumile kumuntu intanethi noma ocingweni futhi mhlawumbe wokuthi wazi kahle impela, Abantu abaningi bavame ukuzizwa kwemizwa ngaphambi kosuku lokuqala. Ngakho nazi amathiphu ukuba usuku olukhulu lokuqala.
Gcina usuku lokuqala short - Ngoba usuku lokuqala kungaba esishubile kancane kuba ekahle ukuze kube short and sweet. Le ndlela ungaba isikhathi esikhulu ndawonye futhi awuqede a high. Kungakhathaliseki ukuthi ungase axhunywe ngesikhathi chatting online, kungaba ezahlukene ngokuphelele uma nobuso, futhi ngeke wazi kanjani uya uthole on uze uchithe isikhathi nabo ekuphileni kwangempela. Ngakho bethela lokhu engqondweni ukugcina usuku lokuqala short.
Ngokwenza ngale ndlela uma ungakhululeki nabo ke ungakwazi ashayise. Kodwa uma THE ngempela kubo, kubalulekile ukugcina usuku iDemo. A iphutha elikhulu abantu benze lapho abapholayo iwukuba ukuchitha isikhathi esiningi ndawonye ngokushesha. Nakuba kungokwemvelo ukufuna ukuchitha isikhathi ndawonye uma uthanda omunye nomunye, it kuzovumela uxhumano ukuthuthukisa more ngokwemvelo uma eba kancane ngokuhamba kwesikhathi. Le ndlela ungakwazi ukumazi omunye nomunye kancane kancane. Futhi uyoba uyayazisa nomunye more uma ungeyena ilungelo itholakale futhi ekuqaleni. Abantu Healthy gcina siqu izimpilo zabo ahlukene kanye ukuchitha isikhathi ukuphola.
Ukunikeza lokhu engqondweni ugweme ukwenza dinner ukubhuka for a date lokuqala. Uma kuvela ukuba awful (futhi can) kuzodingeka ukuba ahlale okungenani ihora, ngokuvamile eside, nabo, noma kube wayedelela ashayise.
Ingabe into izandla phezu and fun - Nakuba isiphuzo the bar ungumuntu ovamile for a date lokuqala akusiyo konke evelele. Futhi kungaba kancane kanzima ukuze aphule ice uma eyayihlezi buqamama omunye nomunye in a formal setting. Ngokufanayo washo ethatha ikhofi kungaba choice kuhle usuku lokuqala ngoba iyashesha futhi kulula, Nokho uma ufuna ngempela benzela kungani bangayi okuthile okungavamile nezandla esikhundleni. Khetha into lapho nenza umsebenzi ndawonye, izandla okwengeziwe kangcono njengoba lokhu kungasiza aphule ice. Izibonelo ezinhle ukupheka ndawonye, ukuhamba in a setting enhle, zobumba noma into lapho kufanele basebenze ngokubambisana. Lokhu kuzothatha ingcindezi off of the nobabili njengoba uzobe enza okuthile ndawonye. It kuvumela ubuntu benu ukuba lulethwe more ngokwemvelo, kunokuba usuku kuphenduke an 'interview' ngale kwetafula, okungase ngokuvamile kwenzeke lapho nihlangabezana endaweni yokucima ukoma.
Yiba ephephile - Lokhu kumele kube yingxenye mantra a dater sika, ikakhulukazi abesifazane abangashadile. Nakanjani ukuthi kumele njalo ukuphepha engqondweni bese ukhetha ukuhlangana endaweni yomphakathi okokuqala uhlangana nomuntu. Ungavumelani ukuya for dinner endlini yabo. Kungakhathaliseki kahle indlela ozizwa ngayo wazi ukuthi umuntu ekhuluma online, awusoze ukutshela ngempela indlela umuntu trustworthy is uze bachitha isikhathi nabo. Futhi, ngempela tune into umuzwa wakho (umzwelo wemvelo omuhle). Yilapho ukuze bakuvikele futhi ngokuvamile umuzwa wakho uzokutshela uma into noma othile engazizwa ilungelo. Lalela kuwo futhi njalo ngibeke nokuphepha kuqala.
Qiniseka ukuthi wena the sengqondo esifanele ngaphambi uya ngosuku lwakho - Abantu abaningi nje ukuya usuku zabo ziqonde kusuka emsebenzini, futhi nakuba lutho olubi kulo kubalulekile ukuze wenze isiqiniseko sokuthi wena lingaveli sengqondo esifanele for usuku lwakho. Uma ikhanda lakho namanje 'ukwenza' ohlwini lwakho ngeke fun okuningi ngosuku! Ngokufanayo uma uvula up wagcizelela, engajabule nokugquma ngeke ukuzenza bahle lokuqala. Thatha imizuzu embalwa ukuba uphumule futhi uzilungiselele ngaphambi kwakho uyikhalime ngosuku lwakho. Thatha ezinye Donsa bese ukwenza umsebenzi aziphumulele uma ezifanele. Lungiselela ingqondo yakho - ngeso lengqondo indlela ongathanda usuku ukuya. Ngisho noma ngabe uya iqonde kusuka emsebenzini ungase wenze lokhu ngenkathi ibhasi.
Abanye besifazane bachitha amahora amaningi ukuzilungisa ngokomzimba, kodwa musa angachithi sikhathi ukulungiselela ngokwengqondo. Nakuba nice ukuze uqiniseke ukuthi ubuyothembela ngokubukeka kwakho, kokuchitha amahora kungaba empeleni wengeze ingcindezi. Kunalokho ukuchitha nje eside ngokwanele ukuba ukuzenza ubonakale smart futhi uzizwe okuhle, ke bachitha imizuzu embalwa futhi ulungiselela ingqondo yakho. Okungcono wena uzohamba ngezinsuku ukuzizwa ukuziqinisa nokuba nombono sisazinzile. Kungaba nice ukudlala umculo esikhuthazayo ngenkathi wena ukuzilungisa futhi ngisho dance emhlabeni ekamelweni. Njengoba wathi yakhe Ungashintshi lapho usuthola usuku uma ungekho esimweni esiphelele engqondweni noma uma wethukile. Ngokuvamile uma ukuphuma endlini ngosuku uyoba uphumule futhi nijabula.
Iba nguwe - Ngezinye izikhathi lapho abantu dates kuqala akuzona ngokwawo. Bathi ukushintsha ubuntu babo ukuzama ukujabulisa omunye umuntu. Mhlawumbe izinzwa zabo ukuze bathole ngcono kubo futhi bagcina Ziphathe emangalisayo, bazama kanzima kakhulu, clamming up noma ngisho ukugqoka a front ukuze afihle izinzwa. Lokhu nhlobo okungadingekile futhi ungakulimaza amathuba ekwakheni uxhumano ukuzijabulisa usuku lwakho. Ngiyazi ukuthi kungaba nerve wracking umhlangano othile okokuqala kangaka ake nginitshele imfihlo kancane. BONKE uzizwa ngabomvu usuku lokuqala! Ngakho usuku lwakho cishe benomuzwa nje nexhala njengoba wena. Kungokwemvelo kangaka uvumele off the hook. Esikhundleni sokukhathazeka izinzwa zakho bagxile ekufundeni into entsha ngalokhu muntu phambi kwakho futhi ucabange bazizwe ekhululekile. Le ndlela uzothola wena eziphumulele okuyinto engokwemvelo. Of uma iye yakhetha ukwenza a izandla umsebenzi njengoba echazwe ngenhla lokhu kungakusiza ukuba uphumule course. Uma ababezizwa lathambisa ubuntu bakho beqiniso ngeke ongumfanekiso. Iba uwena nje. Wena ephelele kahle indlela wena.
Kujabulele - In isiko western kubonakala sonke ukuba athatha nithandana ngokungathí sina. Bayakhohlwa ukuthi lo muntu a life partner ofanele ngalesi sigaba ukuthola. A DATE Zokuqala azikhulumi nje kuphela FOR bekuthola UKUTHI afaneleka isoka / intombi Material. Lokho kuza kamuva. Kungenzeka akuzona – dates iningi lokuqala akuvezi ubudlelwano futhi uma wazi lokhu kungasisiza ukuba uphathe okulindele. Dates First bamane nje ukuba uphume khona umhlangano futhi uma usebenzelana nabantu ezintsha, futhi kukhona for ujabulela wena kokuba fun. By the way 'bengidlala' kuleli cala akusho ukudakwa ngempela noma ocansini, kokubili okufanele kugwenywe ngosuku lokuqala (uma ufuna usuku lwesibili ukuthi). Ngokuba amaklayenti single ngisebenza I batusa njalo ukuphuma khona futhi nithandana emhlabeni wangempela. I kakhulu batusa ufunda isihloko yami phezu nithandana njengoba therapy ukuze ufunde kabanzi.
Six Flags Red To Spot The Date On First